Letter na-Citizen Buba: Dousing Mmeghachi omume eletrik Ịnye ọnụahịa (2)
Site: May Anokuru April 2, 2014
Ebe, ọ dị oké mkpa ka ị na-aghọta na MYTO, na iwebata, wee tinyere ọchịchị onyinye na ọnụego maka kasị ala nke (socio-akụ na ụba) ndị na-ejere, ndị bi na 1 (R1) Atiya. Dị ka "onyinye ọ bụla na-aga ruo mgbe ebighị ebi", a ga-ewepụ site na ufọt ufọt 2014, nyesịworo zuru ezu ime ụlọ maka ndị mmadụ ukpụhọde ihe onwe oru chụpụrụ ọkụ eletrik ahịa na-eweta.
The Nigerian eletrik usoro iwu Commission ma ọ bụ NERC na-gafere na ibu ọrụ nke ịchọpụta ihe bụ nkwụnye dị ka ụgwọ site ọkụ eletrik ahịa, ọ bụghị ndị a naanị ejikwara electric ike nkesa ụlọ ọrụ ma ọ bụ nkesa Network rụọ (DNO). Tariffs si MYTO abụghị otu ihe niile DNOs.
Citizen Buba, -atụ anya ihe gbagowe (ezie na etiti peeji) ije nke ọkụ eletrik ọnụego dị ka oge na-aga. Ọ bụ nnọọ ihe doro anya na NERC si tariffs, bipụtara na June 2012, na ma ike ụgwọ na so ofu kwa ọnwa ụgwọ ọrụ, n'ihi na ndị dị iche iche na edemede nke ndị ahịa, na-ubé ụba kwa afọ. N'okpuru Naijiria tarifu usoro, ọkụ eletrik ahịa na-enyocha kwa afọ ise, iji mee ka mgbanwe ma hụ na-eri mgbake maka investors. M nnọọ nche bụghị sọọ mpi na a gbajiri ndekọ (ghara ịbụ ugboro ugboro) n'elu na-atụ ụfọdụ mgbakwasị n'ihi na udu na-abawanye (ọbụna ma ọ bụrụ etiti peeji) ịbụ fallout nke ike oru privatization, ebe ọ bụ na m ugbua chere tinyere a akara.
Anaghị m ahụ ọnụego maka ọkụ eletrik na-ebili na-eweta n'ihu ọha mkpesa, na-aga site NERC osote-dị ka Promotional na ịnye ọnụahịa, na gọọmenti nsụhọ nke ọ bụla ọjọọ Ripple mmetụta, ọbụna ebe ọgba ala nke ndị na-esonụ-anọgidesi ike:
Gas ọkọnọ (shortfall ke esenyịn gas ruo n'ọgbọ osisi na-eme ka ndị akwụkwụ ike ọchịchị); ogbenye ibu oke abụọ DNO (a dabeere na a pasent nke ngụkọta ike ọgbọ na mba. Dị ka m dee ihe a, nkesa ụlọ ọrụ na-ọbụna na-anata na-erughị nke kenyere pasent); zuo nke nnukwu ọkụ eletrik (ụfọdụ DNOs mgbe 'wobbly' ikike ịzụta nnukwu ọkụ eletrik si ọkụ eletrik ahịa, na-ere na mkpọsa udu na-akwụsị ọrụ); nwekwara ụfọdụ DNOs now na-egosi mmalite ihe ịrịba ama nke 'ego ike ọgwụgwụ', N'ihi ya na-ekwupụta oké njọ post-privatization 'ego pụta' - A ngosipụta nke enweghị ike ịnagide ọrụ na-akwụ ụgwọ, ogwu ogbugba nke ego maka infrastructural mmezi na mmụba.
M na-agba gị ka ị ghara ileghara ihe Nigeria na ihu na ugbu – Arụnyere amụba ikike na hovers gburugburu 9000mw; dị bara uru ikike adịghị nnọọ 5,000mw; na mba ina ugbu a na-eme atụmatụ na ihe 16,000mw. Ọnọdụ a bụ anya n'ebe ihe anyị kwesịrị isi mkpịsị aka anyị chests banyere. Otú o sina dị, na-na-ebe anyị niile na-ọchịchọ bụghị ihe n'elu-n'abalị ihe, ma na-agụnye nza nke usoro dabeere na-eme ka ga-ekwe ezi ihe mgbe e mesịrị.
Ebe, skepticism banyere ịnye ọnụahịa kwesịrị adịghị etinye gị kpam kpam, ma ọ bụ na ị ga-atụ uche si na ihe mkpughe-eme na mpaghara mkpụrụ ruru N'ezie. My ọzọ, na nke atọ, aha a na n'isiokwu na electric ike nkesa ahịa Nigeria, "Gold na ike ndi oru" na-enyere wepụ ụfọdụ akpịrịkpa anya gị anya.
M ara mmetụta na Buba ka na-echere (mgbe 'a nile ogologo ụtọ asụsụ') ihe a ga-eme douse mmetụta nke ụba ọkụ eletrik ịnye ọnụahịa na ratepayers.
Ọ mere unu na-ahụkarị Nigerian erepịakwa ọkụ eletrik, mgbe dị, ghara ịbụ iburu n'uche na a na-echekwa na otutu site Mbelata ke oriri? M chee na ọ bụ a nkịtị idaha ke gị gburugburu ebe obibi nwere ụfọdụ ọkụ eletrik (na-akpọ nche ọkụ na ụlọ) ịbụ nsinsi on, ọbụna na ufọt ufọt ụbọchị. Otu esetịpụ ezi n'ihi na ụdị ndị ọzọ nke aghara oriri nke ike. Ndị na-indulge dị otú ahụ na-abụkarị ndị na-eti mkpu, loudest mgbe ọkụ eletrik ego 'ekpofu' ịnọgide n'ogo ha chọrọ. Ndị a nkejikotara Atiya ndị na-ejere onye e kwesịrị gụrụ akwụkwọ na nzọụkwụ ndị omume dị otú ahụ dị ka ịgbanyụ ngwa, ọkụ, ma ọ bụ telivishọn mgbe ndị a na-adịghị eji; na-agbanwe agbanwe na-eji kọmpat florescent ìhè bulbs; bụghị na-asa uwe na mgbede, wdg.
N'oge na-adịghị mgbe ugbu ọha ahụ tiri mkpu maka mita e catered n'ihi na site DNOs, M na-agba ha ka ha 'see okporo ụzọ' on-enwe Ịnụrụ-Akụkụ-Management (DSM) usoro - DNOs ga-egwuri egwu, na nke a ma ọ bụ ga-akwa ụta na ya. Dị ka hinted ihe mbụ aha, DSM bụ agụmakwụkwọ ndị na-ejere site utilities na otú jikwaa ha ọkụ eletrik ina na ibu. Na nchịkọta, DSM enye Atụmatụ na nghọta ahịa na otú bee oriri (ịzọpụta na-eri na ume, n'ikpeazụ zọpụta ego).
Enwere m ihe ọmụma ngwugwu (gụnyere ọbụna a ọha mkpọsa atụmatụ) na nke a, nke anam ẹfiọk otú ike na-azọpụta ngwa na ịkpali ka ọkụ eletrik (e.g. Ọnụ ọgụgụ kasị elu ịnye ọnụahịa) pụrụ ịkpali mmasị n'etiti Nigerians na-esi zọpụta ike. Ebe, e nweghị anwansi banyere ya. Cutting nke oriri nke 'na-adịghị mkpa ọkụ eletrik' bụ gị mma nzọ na dousing mmetụta nke ụba ọkụ eletrik ịnye ọnụahịa.
Dị ka ndị na-adịghị agbanwe agbanwe ka ngwa ngwa ka ha gburugburu, e nweghị uru na-asị na ya na ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ n'ji muta, Nigerians ga-agbanwe tinyere ihe ọhụrụ iji na-egosi. Ka anyị na-eche ghaghị, na-ezere ịbụ akatọ – Always esi ísì a oke mgbe ọchịcha nwere ike hụrụ crawling n'ebe niile.
Ezie na m na-ahọrọ ịnọgide na-a bara uru ngwọta na-eweta na m kpọrọ òkù ka a ọkachamara ahịa, M na-achọ gị na ezinụlọ gị ọma, na nye ndụmọdụ na i kwesịrị anọgide na a ezigbo nwa amaala nke oké mba.
1 Comment on "Letter na-Citizen Buba: Dousing Mmeghachi omume eletrik Ịnye ọnụahịa (2)"
Iteire Apollos | April 2, 2014 na 12:58 pm | Zaghachi